UDemidov noKorolev, abaphandi baseRussia uTom Rob Smith kunye noWilliam Ryan. | Uncwadi lwangoku
UDemidov noKorolev, abaphandi baseRussia uTom Rob Smith kunye noWilliam Ryan.
Ngoku ewe. Ngoku kusekwindla. Umoya uvuthuza, amaqondo obushushu agqityiwe kwaye imvula encinci iwile. Siswele ikhephu nomkhenkce, kodwa bazakufika kwaye ndiyathemba ukuba bazakuhlala unyaka wonke. Abo bethu bonwabileyo phantsi kweengubo, nezikhafu kunye nekofu eshushu, qhubeka ukucela izithixo zengqele. Ngeli xesha sihamba nomfanekiso-ngqondweni weyona ndawo intle ukuyifumana. Kwaye akukho namnye ongcono iRussia enomkhenkce yolwaphulo-mthetho olunqabileyo kunye nabaphandi abazisombulula ngobuchule nangobuqhophololo obuninzi.
Ngapha koko, siphakathi kwiminyaka elikhulu yokuzalwa kweNguquko ngo-1917 Leo Demidov kunye nomphathi weCandelo loPhando loLwaphulo-mthetho eMoscow, UAlexei Korolev, sisiya kwixesha elithile emva kwexesha elithile: i-30s kunye ne-50s.Abenzi bayo, ababhali UTom Rob Smith noWilliam Ryan, babeyazi indlela yokuhamba phakathi kwamayelenqe ezopolitiko, ababulali ababulalayo kunye nokubanda, kubanda kakhulu.
1 UTom rob smith
2 UWilliam Ryan
2.1 UAlexei Korolev
UTom rob smith
UTom rob smith (Ngo-1979) wazalwa wakhulela eLondon kwaye ngunyana Umama waseSweden kunye nesiNgesi utata. Ufumene i-BA kuLwimi lwesiNgesi kwiDyunivesithi yaseCambridge. Enkosi kwi Harper yokufunda waya ePavia e-Italiya wayokufunda ukuBhala ngokuBumba. Ukubuya kwakhe, waqala wasebenza njengombhali wesicatshulwa sikamabonwakude.
U-2008 wayekho inoveli yakhe yokuqala Kwaye uSmith wayejongwa njengombhali ophumeleleyo ngaloo nyaka. Uphumelele U-Ian Fleming Steel Dagger weyona nto ibalaseleyo iwongwe nguMbutho Wababhali boLwaphulo-mthetho. Smith waphefumlelwa bubomi bombulali waseRussia u-Andrei Chikatilo, ethi phakathi kweminyaka yama-70 ukuya kuma-90 yabulala abantu abangama-52, uninzi lwabo ingabantwana.
Isetiwe kwi-Stalinist Russia kwi 1953. Ubalisa indlela Leo Stepanovich Demidov, Iqhawe lemfazwe elisebenza kubukrelekrele baseSoviet, kufuneka liphande uthotho lokubulala. Oku kuya kumkhokelela ekubeni abuze malunga nezinye zeemfihlakalo zobuntwana bakhe obunzima. Kwaye nangona ekuqaleni wayekholelwa ngokungaboniyo kwi-propaganda esemthethweni yale nkqubo, xa enyanzelekile ukuba ahlole umfazi wakhe ngenxa yokunyelisa, uDemidov udidekile.
Su ukungahambelaniNgaphandle kokuhonjiswa kwakhe kunye nerekhodi eqaqambileyo yenkonzo, wathotywa kwaye wagxothwa eMoscow. Ukufakwa kumkhosi wamajoni kwisixeko seshishini, uya kudibana netyala labathile Ukubulawa kwabantwana kukrokrelwa ngokukrokra ngabasemagunyeni. Demidov uya kuzama ukusombulula le mfihlakalo ngokwabo.
Amalungelo okuba amse kwimiboniso bhanyabhanya afunyenwe URidley Scott nangaphakathi 2015 Umlawuli waseSweden uDaniel Espinosa wayalela uhlengahlengiso lwayo. Baneenkwenkwezi kuyo UTom Hardy kunye noNoomi Rapace kwaye wayenomdla wesekondari njengoGary Oldman okanye uCharles Dance.
Ukususela ngo-2009 1956. UDemidov ubuyele eMoscow kwaye uhlala nomfazi wakhe uRaisa kunye neentombi ezamkelweyo uZoya no-Elena. Kodwa ixesha lakhe elidlulileyo kunye nelifa lomsebenzi wakhe wakudala-njengabahlobo kunye nosapho lwabo wababamba njengegosa lokhuseleko likarhulumente-bayaqhubeka nokumkhathaza. A uthotho olutsha lokubulala iya kusongela ukwaphula olozinzo lubuthathaka. Yintoni egqithisile, Ubomi bentombi yakhe uZoya buya kubeka esichengeni.
Yisihloko sokugqibela kolu ngcelele kwaye yapapashwa ngo-2011, kodwa kukwisiNgesi kuphela. Ikhula ngoku sele isithuba se- Imfazwe ebandayo. URaisa kunye neentombi zakhe ezimbini baya eUnited States kwimishini yoonozakuzaku, kodwa inye intlekele engalindelekanga ukutshabalalisa yonke into eyakhiwe nguLeo Demidov noRaisa.
URyan ngu Umbhali waseIreland ozinze eLondon, apho wasebenza iminyaka eliqela njengegqwetha esiXekweni, ukongeza ekusebenzisaneni amaxesha ngamaxesha kumabonakude nakwifilimu.
Ngaba yakhe Ityala loncwadi kolu ngcelele lwenqaku lomthetheli weCandelo loPhando loLwaphulo mthetho eMoscow, UAlexei Dimitrevich Korolev.
Umzimba ongenabomi wentokazi ibonakala kwisibingelelo secawa engcwalisiweyo. Ityala linikezwe uKapteni Korolev, oza kuthi afumanise ukuba ixhoba ngummi waseMelika. Inkqubo ye- I-NKVD Uthatha isigqibo sokungenelela kwaye uKorolev ulandelwa phantsi koqwalaselo olusondeleyo. Nakuphi na ukuhamba okungalunganga kunokupela ukugxothwa kwakho eSiberia. UKorolev uza kungena kwelabafileyo IMuscovites ukuba ithethe neenkokheli zabo ngelixa beziva benoxinzelelo kubaphathi babo kwaye bezibuza ukuba ngubani onokumthemba.
Emva kophando lwakho kwisihloko sokuqala Korolev ihonjisiwe kwaye ube ngumzekelo kubo bonke abasebenzi baseSoviet. Kodwa ukusebenza kwakhe okwenyani kwimeko yangaphambili kusagutyungelwe kuba wayeza kuphinda abe selubhacweni lokuthinjelwa eSiberia. Ke ngobunye ubusuku umntu unkqonkqoza emnyango kwaye woyika ukuba bamfumene. Endaweni yokuba afumanise ukuba UColonel Rodinov, we-NKVD, ikucela ukuba uthathe uxanduva lokuphanda umrhanelwa wokuzibulala Umfazi osemncinci, uMaria Alexandrovna Lenskaia, ummi ongummi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » UDemidov noKorolev, abaphandi baseRussia uTom Rob Smith kunye noWilliam Ryan.
Ndine-pdf i-El Niño 44 ixesha elide, kodwa andiyithathi lula. Andazi, mhlawumbi ndiyifundile
Kulungile. Ndiyincoma kuwe.
Iincwadi ezi-3 zokufunda xa uziva ulilolo